डर’लाग्दो घटना: वी’भत्स ह त्या गरिएको अवस्थामा दाजुबहिनीको श’व भेटियो…
September 5, 2020 3258
खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–४ डम्वर्खुशिवालयस्थित सामाताङमा दुई वृद्धवृद्धाको वीभ’त्स ह त्या गरिएको अवस्थामा श व फेला परेको छ । जङ्गल नजिकै घर भएका ७७ वर्षीय इन्द्रबहा’दुर श्रेष्ठ र उनकी ६७ वर्षीया बहिनी गोपीमायाको श व उनीहरुको आफ्नै घ’रमा फेला परेको हो ।
दाजुबहिनीको मृ त्यु भएको जानकारी आएल गत्तै जिल्ला प्र’हरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाको टोली घ’टनास्थल पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शा’लिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । घट’नास्थल छिमेकी भोजपुरको सिमानामा पर्छ ।
घट’नाको प्रकृति हेर्दा तीन÷चार दिन अगाडि ह त्या भएको अनुमान गरिएको घट’नास्थल पुगेका प्रनाउ चिमरियाले बताए ।
“यही भदौ १७ गते दिउँसो साढे ४ः०० बजेसम्म उनीहरु काम गरिरहेको आफन्तले देखेका रहेछन्”, उनले भने “अहिले अ नुसन्धान जारी छ, विस्तृत जानकारी अनु सन्धानपछि प्राप्त हुन्छ ।”
घट’नास्थलमा फोन सम्पर्क नहुने भएकाले विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न कठिन भएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । घट’नास्थल जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार बाट करीब ३० कोस टाढा छ ।
एकान्तमा घर भएका उनीहरुको ह त्या लु’टपाट गर्ने स’मूहले गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको गाउँपालिका प्रमुख शङ्करबहादुर राईले बताए ।
स्थानीय हाटबजारमा किराना सामानको व्यापार गर्दै आएका इन्द्रबहादुरको घरमा अहिले पनि किराना पसल रहेको जनाइएको छ । दाजुबहिनीको श व परीक्षणका लागि उदयपुरको गाईघाट पठाउन लागिएको प्रह’रीले जनाएको छ । यो खबर रातोपाटी बाट लिईएको हो ।
Prevशुक्रबार तोलाको कतिमा कारोबार भयो सुन ? हेर्नुहोस्
Nextभारतमा कोरोना सङ्क्रमितको विश्व रेकर्ड, एकैदिनमा यती धेरै संक्रमित थपिए..
यस्तो थियो सय वर्ष अघिको अमेरिका, हेर्नु`होस् केही पुराना दुर्लभ तस्बीर र भिडियो
साउदीमा अस्प`तालको बेडमा रहेका बुबालाई छोरी बिनिताको प्रश्न: मम्मीले झै अर्को बिहे त गर्नुहुन्न ?
हिमालय टिभीका पत्रकारलाई साँच्चै दुर्व्यवहार गरे त बालेनले ? अर्को यस्तो भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित)